Imishwana uDaniel Lacalle: Imisho yakhe engama-35 ehamba phambili nokuthi ungubani | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | 29/07/2021 09:00 | Umnotho jikelele
Awudingi ukuhlala eWall Street ukuze ube ngusomnotho oholayo futhi udlulise ubuhlakani bakho. Lokhu kuboniswa yimishwana kaDaniel Lacalle, umvikeli wezomnotho waseMadrid wenkululeko yezomnotho. Yize engeyena omunye wabantu abacebe kakhulu emhlabeni, unezifundo ezanele kanye nokuhlangenwe nakho okumenza abe nguchwepheshe omkhulu emkhakheni.
Kulesi sihloko sibala izinkulumo ezingama-35 ezinhle kakhulu zikaDaniel Lacalle futhi sizokhuluma nge-biography yakhe ukuze kuqhubeke kuthuthukisa ulwazi lwethu ngale ndaba.
1 Imishwana engama-35 ehamba phambili kaDaniel Lacalle
2.1 Usebenza kuphi uDaniel Lacalle?
2.2 UDaniel Lacalle wafundani?
Imishwana engama-35 ehamba phambili kaDaniel Lacalle
Kuyacaca ukuthi kumele sifunde okuningi ngokwenza amaphutha nokuzitholela izinto ezintsha. Kodwa-ke, imishwana kaDaniel Lacalle, kanye nosomnotho abaningi abadumile, Bangasiqondisa kancane futhi basisize siqonde kangcono ukuthi umhlaba usebenza kanjani kwezomnotho. Ngalesi sizathu sizokwethula ngezansi imishwana engu-35 ehamba phambili kaDaniel Lacalle:
"Uma unikeza unjiniyela isikhathi nemali eyanele, uzothola isisombululo."
"Ukuze uphumelele udinga ukuba nobudlelwano obukhulu nokwesekwa okuvela kumlingani wakho."
"Isizathu sokwehluleka okukhulu kobusoshiyali emhlabeni silula: labo abangazuzi kulabo abenza kanjalo. Azikho izikhuthazi zalabo abalwelayo, futhi kunemivuzo kulabo abagwema umsebenzi nomthwalo wemfanelo. Ukugqwesa akuklonyeliswa, akukaze kufezeke, njengoba iningi licindezela phansi. "
“Ukukhuthaza inkululeko yomuntu ngamunye kunenhlalo futhi kufanelekile kunokufuna ukucindezela wena uqobo lapho ubhekene nezinzuzo zokuthi ungakanani. Ngoba lo muntu unesisa kakhulu futhi unesandla esivulekile kunesimo esidliwa yinyama okuthiwa silawula futhi sabela kabusha ingcebo. "
"Yini ebingenzeka uma izimoto zikagesi noma zegesi yemvelo ziqala ukuthatha isabelo semakethe kokutholakala kuwoyela? Ohulumeni abadlayo ngokungangabazeki bazobheka izindlela zokushintsha intela elahlekile ngenye intela kagesi noma igesi yemvelo. "
“Ukuba nenkani akuthandi. I-austerity ibuhlungu. Kodwa ukuqothuka kuyabacasula abantu abaningi, nabantu abaningi futhi isikhathi eside. "
“Izinhlelo zokungenelela zihlala zicabanga ngabampofu. Yingakho izigidi zazo zakha minyaka yonke. "
"Ayikho inkululeko, ngaphandle uma kukhona inkululeko yezomnotho."
“ISpain ithi ilawula izikweletu. ULindsay Lohan uthi akayena umlutha. "
"Njengomtshali-zimali, umuntu kufanele azi ukuthi akekho noyedwa kubaphathi benkampani, abahlaziyi bezinkampani noma abadayisi ozoba nemiphumela emibi ezingeni lobuchwepheshe ngokunikela ngokuqagela okuthe xaxa."
“Amandla kumele ashibhe, abe maningi futhi athengeke. Izindleko, ukutholakala kanye nokulula kokuhamba nokugcina. Zonke ezinye izindaba. "
"Umkhakha uhlala utshala imali enkolelweni yamanga yokuthi akekho omunye umuntu ozokwenza lokhu akwenzayo."
“Uma into eyodwa icacile, ngukuthi umphongolo wokugcina kawoyela ngeke ubize izigidi zamadola. Kuzobiza uziro. "
"Le nkinga isimbi kakhulu kunesehlukaniso, ngilahlekelwe uhhafu wemali yami kodwa ngisashadile."
“Ukwenza inzuzo, ukwenza inzuzo. Lezi yizinsika ezintathu zecebo lami njengomtshalizimali. "
“Isikweletu ngokwaso asisibi. Isikweletu sibi uma singalethi nzuzo. "
"Ibhalansi, imali yokusebenza kanye nemali kusho konke, Daniel, futhi ngokufunda ama-balance sheet uzobona ukuthi umhlaba usuhlanya."
"Ngubani abathembela kuye kakhulu, umuntu ogembula imali yakhe ahlaziye iqiniso noma umuntu obiza - noma othola amavoti - ngokufihla lokho?"
“Yonke imithethonqubo emhlabeni ayizukuhlinzeka ngamasiko nengqondo. Kufanele uzazise, ​​ufunde. Akujabulisi, kepha ukuphela kwendlela. Noma kunjalo sizoba nephutha ngesinye isikhathi. "
“Isikweletu isidakamizwa, bengilokhu ngiyiphinda incwadi yonke. Kufiphaza ukubaluleka kokuqonda, kusenza sizizwe siqinile, sinamandla, kusenza sibone okukhona ngombala ogqamile ngisho nangakusasa. Futhi kuyinkohliso ngoba isikweletu, njengezidakamizwa, akuyona enye into ngaphandle kobugqila ... "
“Namuhla sekukhona ukucabanga kwezomnotho okusho ukuthi uMbuso uyinhlangano leyo izinqumo zayo zezomnotho ngokwemvelo zinenhloso enhle ngakho-ke amaphutha ayo kumele axolelwe. Abangenele bathemba ukuthi uzizwe ubumbeke ekhoneni, awusiboni esinye isisombululo nokuthi wamukela ukuthi ayikho enye indlela yokuphuma ngaphandle kokuzinikela ezimfunweni zohulumeni. "
“Abezindaba bakhumbula kuphela izimakethe lapho izinto zingahambi kahle. Kungani? Ngoba sisemnothweni lapho ukuhweba kwezezimali kudelelwa yimibono. "
“Ngaphandle kwesiko lezezimali, ukukhohlisa kuzoqhubeka nokuvela. Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi jikelele uthole isiko lezezimali. Ukukhala ngemuva kokuthi "nginconyelwe kimi" kuyadabukisa, kepha ikhambi elingcono kakhulu lokungazi ulwazi: ukufunda futhi ngaphezu kwakho konke ukubona ukuthi iphutha alikho ezimakethe, kodwa ngabantu abangazi ukuphatha izifiso zabo, bathatha iseluleko esivela kubantu okungenzeka ukuthi abanamqondo omncane njengabo, noma bavumela ukuthathwa yizinkolelo eziphindaphindwe eminyakeni yohlobo lokuphila kwabo. "
"Inkohliso enkulu kule minyaka eyishumi eyedlule bekuwukubiza ukukhula ngokuthi empeleni bekuyizikwelede, kanti lokhu okukhona manje ukubiza ukuqina ngento engekho ngaphandle kokuqukethe imfucuza."
"Yonke impumelelo encane kufanele izuzwe, futhi ukufinyelela kuyo yonke imigomo kuwumsebenzi onzima futhi okhandlayo."
“Inkululeko yezomnotho yenze okuningi ukunciphisa ububha kunanoma iyiphi enye inqubomgomo. Inhlekelele yokwehlukaniswa kwezinto emhlabeni ifakazele ukuthi ukusebenzisa imali njengokuwukuphela kwesilinganiso kuholela ekuqothukeni. "
"Ukuphuma enhlekeleleni enkulu, kufanele ukhuthaze inkululeko, wandise imali engenayo bese ukhangisa ngokuncintisana."
“Ngiyayithanda iSweden. Umhlaba wonke kufanele ube njengeSweden. Bathanda ukuphuza, bakhumule futhi abantu bahle. Angikwazi ukucabanga ngesizwe esingcono emhlabeni. "
"Ngesikhathi isihogo kwathathwa isinqumo sokuthi ukuphrinta imali kuyinqubomgomo 'yomphakathi'?"
"Yenza okufunayo ... kodwa ngokuzibophezela okuphelele."
"Ukungalingani akuncishiswa ngosizo, kodwa ngezincomo zokudala ingcebo."
“Noma yimuphi umuntu othathwa njengomuntu onengqondo futhi olinganiselayo; uma eyingxenye yesixuku, ngokushesha uba ngunondindwa. "
“Izixazululo zemilingo abasiphakamisela zona kaninginingi ziyefana nanjengenjwayelo: yehlisa isamba, phrinta imali futhi wenze ukukhululeka ezikweletini. Impofu wenze izigqila. "
"Umnotho uzidla ngokweqile ngesikweletu."
"Umkhulu wami, owayengonga kakhulu, wayehlale ethi: qaphela izindleko, usujwayele."
Ku-1967 i-protagonist yethu yazalelwa eMadrid: Daniel Lacalle. Lo somnotho waseSpain waqala umsebenzi wakhe ekuphathweni kwephothifoliyo kanye nokutshalwa kwezimali e-United States. Uqhubeke naseNgilandi, ikakhulukazi eLondon, kufaka phakathi imali yebhizinisi, izinto zokusetshenziswa kanye nemali engenayo eguquguqukayo nengaguquki. Kumele kuqashelwe ukuthi ingene ngevoti iminyaka engaphezulu kwengaphansi kwemihlanu ilandelana kwabathathu abahamba phambili kubaphathi be-Extel Survey, okuyisikhundla seThomson Reuters. Lapho wavotelwa kule mikhakha elandelayo: Electric, General Strategy and Oil. Ngakho-ke singacabanga ukuthi imishwana kaDaniel Lacalle inolwazi olubalulekile lwasemuva kanye nokuhlangenwe nakho.
Ngokuqondene neSpain, lapha kuyaziwa ngokuba khona kwayo kwimidiya eyahlukahlukene. Kuzo uvikele kaningi inkululeko yezomnotho. Ngokusho kwakhe, ukuze kuzuzwe inkululeko yezomnotho kuyadingeka ukuthi kuncishiswe ukusetshenziswa kwemali yomphakathi, kwenziwe imikhakha yamasu kube ngasese futhi kwehliswe namandla oMbuso. Ezingeni lezomnotho, abagxeki babize uDaniel Lacalle njengo "neoliberal" no "ultra-liberal" ezikhathini eziningana.
Esinye isizathu esenza ukuthi igama lakhe lizwakale sijwayele thina kungenxa yokuba khona kwakhe kwezombusazwe. Ungumeluleki kulokho okubhekiswe odabeni lwezomnotho lukaPablo Casado, ophethe i-PP. Ngaphezu kwalokho, uDaniel Lacalle wafakwa endaweni yesine yohlu lwe-PP ukuze angene okhethweni kwiCongress of Deputies olwenzeka ngo-Ephreli 2019. Yize aqokwa njengephini, uLacalle washiya phansi ukuqoqa imizuzu, okusho ukuthi wasula phansi esihlalweni sakhe. Ngokusho kwakhe, ukwenze lokhu ngemuva kokucabangisisa ngakho.
Lo somnotho naye uyaziwa ngokubhala izincwadi eziningana kwezomnotho, lapho singathola khona imibono eminingi, ukugxeka nezeluleko kunamazwi kaDaniel Lacalle. Nalu uhlu lwezincwadi zakhe:
"Uhambo oluya enkululekweni yezomnotho"
"Umama Wezimpi Zonke"
«La Gran Trampa» (kanye noJorge Paredes)
"I-Blackboard kaDaniel Lacalle"
"Ukukhuluma abantu bayaqonda"
Ngaphandle kwalezi zincwadi zezomnotho, uDaniel Lacalle naye nsuku zonke ubhala ikholomu ku El Confidencial. Ngaphezu kwalokho, uvame ukusebenzisana neminye imidiya efana ne- 13TV, lo BBC, lo I-CNBC, Izwe, Isibuko somphakathi, Intereconomy, Investment, Isizathu, La Sexta, Umhlaziyi y The Wall Street Journal.
Usebenza kuphi uDaniel Lacalle?
Njengoba sesishilo ngaphambili, echaza ukuthi kungani imishwana kaDaniel Lacalle ingasiza, le Madrilenian ingusomnotho nomphathi wezimali zokutshala imali. Njengamanje usebenza njenge Umphathi Wezomnotho eTressis. Ngaphezu kwalokho, usebenza njengoprofesa e-IEB nase-IE Business School.
UDaniel Lacalle wafundani?
Abaningi bazozibuza ukuthi le ndoda ifundani. Yebo, ngokunikeza inani elithe xaxa emabintweni kaDaniel Lacalle, kufanele sigqamise umsebenzi wakhe wokufunda. Uzuze iziqu eziningana empilweni yakhe yonke:
Iziqu zeSayensi Yezomnotho Nezamabhizinisi ezivela e-Autonomous University yaseMadrid
I-CIIA (Certified International Investment Analyst) iziqu zezingcweti zomhlaba wonke
Master in Ucwaningo Lwezomnotho (UCV)
I-Postgraduate (PDD) evela e-IESE (University of Navarra)
Ngalokhu siphetha imininingwane ngalo somnotho omkhulu. Ngiyethemba ukuthi imishwana kaDaniel Lacalle isebenze njengogqozi kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izilinganiso zikaDaniel Lacalle